कोरोना राहतको लागि झुठो विवरण बुझाउंदा जेल परिएला ? – Durbin Nepal News
कोरोना राहतको लागि झुठो विवरण बुझाउंदा जेल परिएला ?
बैशाख २८, २०७७ २:३१ मा प्रकाशित
The U.S. Department of Justice seal is displayed onapodium followinganews conference with Rod Rosenstein, deputy attorney general, not pictured, in Washington, D.C., U.S. on Thursday, Dec. 20, 2018. Rosenstein announced accusations that two Chinese nationals conducted an "extensive" hacking campaign in association with Chinese state security officials for more thanadecade. Photographer: Yuri Gripas/Bloomberg via Getty Images
कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द भएकाहरुलाई राहत दिन अमेरिकी सकारले ल्याएको मल्टी बिलियन डलरको पे चेक प्रोेटेक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत राहत मागेका दुई जनालाई संघीय एजेण्टहरुले पक्राउ गरेका छन । पक्राउ पर्ने दुईजनाले नै आफ्नो व्यवसायको बारे झुठो बिवरण दिएर लाखौको राहत मागेका थिए । उनीहरुको विवरणमाथी शंका लागेपछि उनीहरुले झुठो विवरण बुझाएर सरकारलाई छल्न खोजेको आरोपमा पक्राउ गरिएको अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ जष्टिसले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा म्यासाचुसेट्स, एण्डोभरका ५२ बर्षीय डेभिड ए स्टाभेली र रोड आइल्याण्ड, बारबारीकका ५१ बर्षीय डेभिड बुटिजगर रहेको डिपार्टमेन्ट अफ जष्टिसले जनाएको छ । उनीहरुलाइ गत मंगलबारनै पक्राउ गरिएको थियो ।
आरोपीहरुमाथी एसबीएलाई प्रभावित पार्न खोजिएको, गलत बयान र विवरण बुझाएको र जालसाँजीको षडयन्त्र गरेको आरोप लगाइएको न्यायिक विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन । उनीहरुले कोरोना भाइरसको संकटबाट मुक्ति पाउन भन्दै सरकारी विशेष प्याकेजको लागि पहल गरेका थिए । पक्राउ परेका म्यासाचुसेट्सका स्टेभेलीले लगभग ४ लाख ४० हजारको माग गरेका थिए । उनको विवरणमा तीन रेष्टुरेण्टमा कर्मचारीहरुलाइ तलव दिनुपर्ने विवरण पेश गरेका थिए । तर महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिले नै दुइ रेष्टुरेन्ट बन्द भइसकेका थिए भने तेस्रो रेष्टुरेन्टमा पनि उनको संग्नता थिएन । त्यस्तै बुटीजगरलेपनि एक लाख डलरको माग गरेका थिए झुठो विवरण बुझाएर । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण साना व्यवसायीहरुलाई राहत दिन भन्दै सरकारले तीन सय ४९ बिलियन डलरको राहत प्याकेज ल्याएको छ ।
जष्टिस डिपार्टमेन्टले छानविनलाई तिव्र बनाउंदै
अमेरिकी जष्टिस डिपार्टमेन्टले पे चेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत राहत माग्ने साना व्यवसायीहरु उपर छानविनलाई तिव्र बनाउने जनाएको छ । साना व्यवयासको नाममा झुठो विवरण बुझाएर राहत लिन खोज्नेहरु बढेपछि छानविनलाई तिव्र बनाउने बिभागले जनाएको हो । गलत विवरण बुझाउनेहरुलाई जेल जान सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
साना व्यवसायीको व्यवसाय जोगाउन सरकारले ल्याएको विशेष राहत प्याकेजमा गलत विवरण भर्नेहरु प्रशस्तै भएकोले तीनको छानविन गरी कारवाही गरिने एफबीआइका स्पेसल एजेन्ट इन्चार्ज जोसफ आर बोनाभोलेन्टाले बताएका छन । ५०० भन्दा कम कामदार हुने कम्पनी तथा व्यवयायले पीपीपी अन्तर्गत राहतको अपिल गर्न सक्नेछन । तर उनीहरुको व्यवसाय कोरोना भाइरसको कारण प्रभावित भएको पुष्टि हुनुपर्छ । यदि विवरण झुठो भएमा कानुनी फन्दामा पर्न सकिन्छ ।